ओमकार टाइम्स कुनै बेला बेलायतलाई ५७ करोड ५० लाख सहयोग गर्ने नेपाल आज कसरी गरिव भयो ? – OMKARTIMES
कुनै बेला बेलायतलाई ५७ करोड ५० लाख सहयोग गर्ने नेपाल आज कसरी गरिव भयो ?
कुनै बेला बेलायतलाई ५७करोड ५० लाख सहयोग गर्ने नेपाल आज कसरी गरिव भयो ?
जेलमा मदन भन्डारीलाई भात पुर्‍याउन जाँदा लव परेर नेता हुने चानस पाएकी विद्या भण्डारि आज १८ करोडको गाडी चड्ने कसरी भईन ?
आफ्नु बिहेमा राजाले बीस हजार ऋण गरेको ६० वर्षपछि एक राजस्व कर्मचारीले ६ अर्वको भ्रष्टाचार गरे तर कुनै कारवाही भएन किन ?
हिड्न मिल्ने बाटो छैन,पिउन योग्य पानी छैन, युवालाई देशमा रोजगारी छैन । निर्मला जस्ता पिडितलाई न्याय छैन । तर सरकारलाई विश्वसुन्दरीमा नेताकी छोरीलाई जिताउने चासो छ ।
बोका पाल्न अनुदान छ, भैंसी पाल्न अनुदान छ , सुँगुर पाल्न अनुदान छ तर गाई पाल्न भने सरकार सर्त तेर्स्याउँछ- जर्सी पाल्ने भए मात्र दिने । यहाँभित्रको राजनीति के हो बुझ्ने कसले ?
पशुपतिनाथको कृपाले मात्र कति दिन चल्ला ?
भुटानमा विद्यालय निशुल्क छ, विश्वविद्यालय निशुल्क छ, हस्पिटल निशुल्क छ र जेष्ठ नागरिकको भरणपोषण राज्यले गर्छ । नेपालमा पानीको ३० रुपैयाँ र पिसाव फेरेको पाँच रुपैयाँ । सिंगापुर र स्विजर्ल्याण्ड बनाउँछु भन्नेहरूले कमसेकम भुटान जत्तिको बनाए हुँदैनथ्य
यसलाई प्रत्येक नेपालीले व्यापक शेयर गरि जवाफ माँगौं, जनताको छोराछोरीले गर्ने शासनमा प्रश्न गर्ने र जवाफ पाउने अधिकार त छ होला।